Dhalinyaro Baraha Bulshada Kusoo Bandhigay Sawiro Anshaxa Ka Baxsan | Berberatoday.com
Dhalinyaro Baraha Bulshada Kusoo Bandhigay Sawiro Anshaxa Ka Baxsan
Hargeysa(Berberatoday.com)-Waxa dhawaan soo if baxay dhalinyaro Rar iyo Dumar isugu jira oo Arrimo Cajiib ah oo aad loola yaabay ku soo ban dhigay Baraha Bulshada, kuwaasoo ka Cadhaysiiyey Dadbadan oo dhaqanka ku adag.
Dhalinyaradan Oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa bulshada la wadaagayey sawiro anshaxa dhaqanka suuban ee Soomaalida ka baxsan, Sidoo kalene Diiniyan laga dayriyey sida ay Rag iyo dumar iskugu dhag-dhaganyihiin oo aan hore loo arag isla markaana aan la garanayan waxay ay ka turjumayaan iyo u jeedada rasmiga ah ee ka damaysa.
markasta oo aad booqatid baraha bulshadu ku wada xidhiidho ee facebook ga waxa ay indhahaagu qabanayaan sawirro ay ka muuqdaan wiilal iyo gabdho da`yar oo inta ay ku soo labisteen hu` modow oo isla markaana isku kala qaybiyay laba qaybood oo ka kooban rag iyo dumar dibna samaynaya ficilo kala duwan sida iyagoo laabta isku haya ama iyagoo banaynaya (Qaawinaya) qaybo ka mid ah jidhkooda, sida hablaha qaar oo lugna ku istaagaya lugna saaraha Wiilka meelo Jidhkiisa ka mid ah.
waxaa si wayn loo hadal hayaa sawiradan layaab ka leh ee wiilasha iyo gabdhuhu ku wada jiraan oo lagu soo bandhigay baraha bulshadu ku wada xishiidho ee loo yaqaano facebook oo cid kasta oo isticaamsha ay aad ulla layaabayaan sawiran waxaana aad arkaysaa dadkii oo qaybta rayi dhiibashada ama loo yaqaano (Comment) iskula wadaagaya fikiro kala duwan oo ay ku kala qayb sameen dadyowga kala duwan ee isticamaala facebook-gu.
Arrintan ayaa imanaysa ka dib markii maalmo kooban uun laga nastay sawiro Mudoomiyinkii u dambeeyey aad u haystay Baraha Bulshadu ku wada xidhiidho Oo laysku waydarsanyay sawirro kala duwan oo la xidhiidha sanadkan aynu ku jirno iyo sanadihii hore ee la soo dhaafay.
Waxana muddo badan lagu soo celcelinayay baraha bulshada oo qofkastaa uu samaynayay in uu is barbar-dhig ku sameeyo sawirradiisa kala duwan ama uu wakhti fara badan ka soo wareegay iyo kuwa uu dhawaan galay.